11 संगठनको मापदण्ड अनुसार २ दशमलब ५ पिएमबाट मापन गर्दा हावामा बढीमा ४० सम्म धुलोधुवाँका कणहरु हुनुलाई स्वस्थ मानिन्छ । तर, अहिले काठमाडौँमा २ दशमलब ५ पिएम एक सय ९० सम्म पुगेको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ । जसलाई हानिकारक हावा मानिन्छ ।
१. अस्पतालमै गरे वृद्धले आत्महत्या
२. संकटग्रस्त स्वास्थ्य–२ : जनशक्ति परिचालनमा कमजोरी, १० जना हाकिम र दुई हजार कर्मचारी कामविहीन
४. यस्तो छ राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश (पूर्णपाठ)
६. क्यान्सरसँग लडिरहेकी यी दुई वर्षे बालिका, जसले खोजिरहेकी छिन् दुर्लभ रगत
७. क्षयरोग र एड्स उन्मूलनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन
८. स्वास्थ्य सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी
९. हुनुपर्ने ४२ प्रकारका औषधि तर स्वास्थ्यचौकीमा जम्मा एउटा मात्र
९. कर्मचारी समायाेजनको आधार संघ र प्रदेश तथा स्थानीयमा छुट्टाछुट्टै, २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्र पुग्नैपर्ने